फ्लोरक्रस गरेका सांसद श्रेष्ठ भन्छन्– के को कारबाही ? कुनै डर छैन - Lekhapadhi.com मुख्य समाचार : Lekhapadhi.com lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ४ श्रावण २०७८, सोमबार १४:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । राजनीतिमा रहेदेखि ओली निकट रहँदै आएका एमाले सांसद कृष्ण श्रेष्ठले अकस्मात गुट परिवर्तन गरेर देउवालाई मत हालेका छन् ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुटमा रहँदै आएका श्रेष्ठ (किसान) ले सर्वोच्च अदालत र मतदाताको सम्मानका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको बताएका छन् । तर पनि आफु गुटभन्दा पनि एमालेको सांसद भएको बताए ।
श्रेष्ठले भने- “म नेकपा एमालेको गुटमा छु । मेरो गुट परिवर्तन भएको छैन । अहिलेसम्म पनि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएको सांसद हुँ । म नेकपा एमाले एकता होस् । नेकपा एमाले मात्रै होइन बाम गठबन्धन होस् भन्ने चाहन्छु,”।
आफूले बाम गठबन्धनबाट चुनाव जितेको भन्दै बाम गठबन्धनको पक्षमा रहेको पनि बताए ।मन्त्री नबनाइएको हुँदा नै फ्लोक्रस गरेको संकेत समेत गरे ।
उनले नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहु क्षेत्र नम्बर १ मा हराएका थिए ।
कांग्रेसकै गोपालमान श्रेष्ठ, आरजु राणा देउवालाई हराउने एमाले सांसदलाई पटक पटक मन्त्री बनाइएको तर धेरै पटक मन्त्री भएका पौडेललाई आफूले हराएको भए पनि मन्त्री नबनाइएको समेत बताए ।
“गोपालमान श्रेष्ठ हराउने सांसदलाई पटक पटक मन्त्री बनाइयो । आरजु राणा देउवा हराउनेलाई मन्त्री बनाइयो । पटक पटक मन्त्री भएका रामचन्द्र पौडेललाई मैले हराएको र मन्त्री नपाउँदाको असन्तुष्टि छँदै थियो । तर, त्यो मात्रै मेरो असन्तुष्टि होइन । सर्वोच्च अदालत र तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ का जनताको सम्मानका लागि विश्वासको मत दिएको हो,” उनले भने ।
“सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्छु भनेर हिजो संसद्को रोष्टमबाट प्रदिप ज्ञवालीले बोल्नुभएको छ । त्यसैले कारबाहीको डर भएन । अर्को कुरा कारबाही गर्दा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जो नेकपा एमाले निर्माण गर्दाका नेताहरु यो पक्षमा रहेकाले कारबाही कसरी गर्ला, के गर्ला ? म भन्दा आदरणीय नेताहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई जे गर्छ मलाई पनि त्यही गर्लान्, त्यसमा मलाई कुनै डर छैन ।”
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै कारबाही गर्न पाउँदैन भनेकाले पार्टीले कारबाही गर्न नसक्ने समेत बताएका छन् ।